Talaabo nuucee ah ayey soomaliya qaadi doontaa ka dib heshiiskii Qatar iyo Sacuudiga ? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Talaabo nuucee ah ayey soomaliya qaadi doontaa ka dib heshiiskii Qatar...
Talaabo nuucee ah ayey soomaliya qaadi doontaa ka dib heshiiskii Qatar iyo Sacuudiga ?
Somaliya ayaa sanadkii 2017-kii sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisaddii xilligaa soo kala dhexgashay dalka Qatar oo dhinac ah iyo Sacuudiga, Emirate-ka, Bahrain iyo Masar oo darafka kale ahaa, iyadoona hawadeeda u ogolaatay inay adeegsadaan diyaaradaha dalkaasi, maadaama cir, bad iyo dhulba laga go’doomiyay.
Maqaal horeMaxaa ka soo baxay shirweynihii beesha Hawiye ee Muqdisho lagu qabtay ?
Maqaal XigaDhaqtar Muslim ah oo oo qaaday talaabo dad u badan Bukaano farxad galisay !!